Doorashada oo isbaaro loo dhigtay & Eeda Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Faragelinta xafiisyada sare ee dowladda, sida Farmaajo, Fahad Yaasiin iyo Mahdi Guuleed ayaa caqabad ku noqday doorashadda Soomaaliya inay ku qabsoonto waqtigeeda, si hufan oo wadar-ogol ah.
Hayeeshee, jadwalka ayaa u muuqda in ay wax badan iska badali doonaan, maadaama 15 July loo madlanaa in ay bilaabato soo xulidda iyo diyaarinta ergada doorashada mana muuqato wax tallaabo ah oo ilaa hada la qaaday.
Cabdi Xaashi, gudoomiyaha Aqalka Sare oo ah siyaasiga ugu miisaanka culus kuwa kasoo jeeda Somaliland ayaa aad u dhaliilay sida uu Ra'iisul Wasaare Rooble u maareeyay hanaanka turxaan-bixinta gudiyadda doorashadda.
Qoraal uu soo saarey shalay, oo nuqul kamid ah Keydmedia Online lasoo gaarsiiyay ayuu ku sheegay Cabdi Xaashi in Rooble uu iska indha-tiray baaqyo uu u jeediyay iyo xiriiro toos ah uu uu la sameeyay, oo kaga dalbaday inuu xaliyo khilaafka ka taagan gudiga doorashadda Xildhibaanada gobollada Waqooyi.
Dhex-dhexaadnimada iyo madaxbanaanida FEIT
Tan kale, Su'aallo badan ayaa dul-saaran dhex-dhexaadnimada iyo madaxbanaanida Gudiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal [FEIT], kaasoo ay ku jiraan xubno lagu eedeeyay inay xiriir dhaw la leeyihiin Farmaajo, oo ah Musharax xilka Madaxweynaha u tartamaya markii 2aad.